शशांक कोइरालाले चुनावपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने , देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने - Nepal News - Latest News from Nepal
By nepalnews	 Last updated Nov 9, 2017
काठमाडौं,२३ कात्तिक। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले चुनावपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तरवार्तामा कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘शेरबहादुरजी पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । उहाँलाई लाग्दो होला म नै प्रधानमन्त्री बनुँ । तर, हामीले प्रधानमन्त्रीमा परिर्वतन आउनुपर्छ ।
महामन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई मात्र होइन, आफैंलाई पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । कोइरालाले भने, ‘रामचन्द्र पौडेल छन्, नेतृत्व लिन ममा के कमी छ र ? क्षमता छ ।
पौडेलको पक्ष किन लिएको भन्ने प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने सबै गुण उनमा रहेको रहेको बताए । ०४८ मा अघि सारिएको एक व्यक्ति एक अवधारणा स्मरण गर्दै उनले यो अहिले पनि ठीक हुने बताए ।
कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि हालै मात्र सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसैलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छैन ।
कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार चुनावी घरदैलो गर्ने क्रममा सिंहले आफू उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री हुने काठमाडौं १ का मतदातालाई आश्वासन दिएका छन् ।
‘कांगेस कमजोर भयो, धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह’
बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेस आफ्नो इतिहासमा अहिले नेतृत्व कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गरे । एमाले र माओवादी केन्द्रले साम्यवाद ल्याउँछु भनेको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले कम्युनिष्टहरुलाई साइजमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले आगामी चुनावपछि धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यदि एमाले माओवादी गठबन्धनले जिते र जनमत संग्रह गरिएन भने जनता आफैं उठ्ने कोइरालाले बताएका छन् ।
राजतन्त्रबारे भने जनमत संग्रह गर्नु नपर्ने कोइरालाले बताए । उनले भने, अब राजतन्त्र फर्काएर केही हुनेवाला छैन ।
महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने सोचमा रहेको समेत बताएका छन् ।